WhatsApp on Apple Watch: sida loo dhigo oo loo isticmaalo | Madasha Mobile -ka
WhatsApp on Apple Watch: sida loo xidho oo loo isticmaalo
Ignacio Sala | 29/09/2021 22:00 | Shabakadaha Bulshada, WhatsApp
Apple Watch -kii ugu horreeyay wuxuu suuqa ku soo dhacay bishii Maarj 2015. Tan iyo markaas, codsiyo badan ayaa si tartiib tartiib ah ula qabsanayey hawlgalka aaladdan, xitaa waxay gaareen soo dejiso barnaamijyada Apple Watch, codsiyada u shaqeeya in ka badan ama ka yar si madaxbannaan iPhone.
Nasiib darrose, WhatsApp ma ahayn mid iyaga ka mid ah iyo 6 sano ka dib markii la bilaabay Apple Watch -kii ugu horreeyay, isticmaaleyaasha WhatsApp oo leh Apple Watch farriimaha gacantaada kama soo diri kartid. Waxa kaliya ee ay samayn karaan waa qaabilaadkooda. Si kastaba ha noqotee, WhatsApp mas'uul kama aha oo kaliya maadaama Apple sidoo kale qayb ahaan eedda leedahay.
Moodooyinka leh xiriirinta xogta, watchOS (nidaamka hawlgalka Apple Watch) uma oggolaanayo codsiyada farriinta u shaqayso si madaxbannaan adiga oo aan ku xidhnayn taleefanka casriga ah. Ugu dambayntii, iyaga dhexdooda, carra aan xaaqayn sida odhaahdu tahay.
Haddii aad rabto inaad ogaato inaad ogaato sida loo helo WhatsApp on Apple Watch Hoos waxaan ku tuseynaa xulashooyinka ugu wanaagsan iyo codsiyada hadda laga heli karo App Store.
1 Adigoon rakibin wax codsi ah
2 ChatApp + ee WhatsApp
3 WatchChat ee WhatsApp
4 WatchsApp ee WhatsApp
5 WatchApp + ee WhatsApp
Adigoon rakibin wax codsi ah
Habka ugu horreeya ee aan ku tusno inaad ku yeelan karto WhatsApp -ka Apple Watch wuxuu ka kooban yahay ha rakibin wax codsi ah, ilaa iyo intaadan rabin ama aad u baahan tahay inaad dirto farriimo, haddii kale ikhtiyaarkan sax ma noqon doono.
Mar kasta oo aan ku helno farriin WhatsApp ah iPhone -ka, waxaa sidoo kale si toos ah loogu ogeysiiyaa Apple Watch. Laga soo bilaabo ogeysiiska Apple Watch, waxaan ka jawaabi karnaa farriimaha isticmaalka codkeenna si aan u qorno farriinta.
Haddii aynaan hadli karin waxaan kaga jawaabi karnaa qoraal xarfaha shaashadda, iyadoo la isticmaalayo emoticons ama isticmaal mid ka mid ah kuwa kala duwan jawaabaha caadiga ah in dalabku na siiyo.
Mar haddii aad la qabsato u isticmaal WhatsApp sidan, looma baahna in lagu rakibo codsiyada dhinac saddexaad ee kala duwan ee laga heli karo App Store si loogu oggolaado dirista iyo helista farriimaha WhatsApp.
Haddii ku -tiirsanaantaada WhatsApp aad u sarrayso oo aad u baahan tahay si joogto ah u dir fariimaha xaalad kasta Oo hadda, waa inaad doorataa qaar ka mid ah codsiyada kala duwan ee aan hoos ku tusno.
Dhammaan codsiyada aan hoos ku tusno waa shaqeeyaan sida WhatsApp Web -ku u sameeyo, taas oo ah, waa inaan iska baarnaa lambarka QR ee arjiga si loo isticmaali karo. Haddii aan ka baxno, dalabka Apple Watch wuu joojin doonaa shaqada.
Dhammaan codsiyada waxay na siiyaan shaqooyin isku mid ah, maadaama ay ku saleysan tahay Shabakadda WhatsApp, marka waxa kaliya ee ay tahay inaan tixgelinno waa qiimaha uu dalabku nagu kici karo, maadaama inkasta oo gabi ahaanba lagu soo dejisan karo si bilaash ah, waxay ku daraan wax iibsiga gudaha arjiga si loo furo gelitaanka dhammaan hawlaha.
ChatApp + ee WhatsApp
ChatApp + ee WhatsApp waa mid ka mid ah codsiyada ugu caansan App Store taasi waxay noo oggolaanaysaa inaan ka isticmaalno WhatsApp -ka Apple Watch -ka. Codsigan, waxaan ka heli karnaa dhammaan farriimaha, sheekeysan karnaa, dhejin karnaa farriimaha codka, arki karnaa sawirrada iyo xitaa fiidiyowyo HD ah.
ChatApp + ayaa na siiya:
Helitaanka dhammaan sheekooyinka sheekaysiga oo ay ku jiraan kooxaha.
Ku jawaab farriimaha adiga oo adeegsanaya kiiboodhka dalwaddii ama amarrada codka.
Samee liis jawaab degdeg ah.
Ku arag sawirrada iyo fiidyowyada HD.
Hel sawirka sawirka.
Dir oo dhageyso farriimaha codka.
Waxa kale oo aad arki kartaa dhejiska.
ChatApp + ee WhatsApp ayaa kuu diyaar ah ku soo dejiso bilaash, oo ay ku jiraan iibsiyada si loo furo dhammaan sifooyinka ay na siiso. Waxaa laga rabaa iOS 11 wixii ka dambeeya.
WatchChat ee WhatsApp
Codsi kale oo xiiso leh in WhatsApp lagu yeesho Apple Watch waa WatchChat, codsi leh a Celcelis ahaan qiimeyn 4,4 xiddigood 5 macquul ah ka dib markii la helay in ka badan 650 dib u eegis. Soo -saarehu wuxuu u malaynayaa inay tahay mid ka mid ah codsiyada noocan ah ee helay cusboonaysiinta ugu badan tan iyo markii la bilaabay 3 sano ka hor.
Iyadoo WatchChat aan awoodno:
Hel dhammaan sheekooyinka WhatsApp
Dir oo hel farriimaha codka
Ka jawaab sheekaysiga adiga oo adeegsanaya keyboard -ka, jawaabaha deg -degga ah, adoo adeegsanaya amarrada codka ama teebaynta.
Daawo fiidyowyada tayada HD.
Soo gal cusboonaysiinta xaaladda isticmaalaha.
Ku arag sawirrada HD oo xitaa waxay noo oggolaaneysaa inaan ku dhajino sawirrada.
Habee jawaabaha deg dega ah.
Waxaan sidoo kale ka bilaabi karnaa Apple Watch wada sheekaysiga cusub.
WatchChat ee WhatsApp waa oo bilaash ah ayaa laga soo dejisan karaa oo ay ku jiraan wax-ku-iibsashada app-ka, iibsashada noo oggolaanaysa inaan furno gelitaanka dhammaan astaamaha ay na siiso iyada oo aan xad lahayn. Wuxuu u baahan yahay macruufka 11 wixii ka dambeeya.
WatchsApp ee WhatsApp
WhatchsApp ee WhatsApp waa codsi kale oo xiiso leh in la tixgeliyo, codsi taas ah waxay na siisaa isla shaqooyinka marka loo eego dhammaan codsiyadii hore oo ay ku jirto suurtogalnimada in si toos ah loola wadaagi karo goobta Apple Watch -ka, hawl aan laga heli karin dhammaan codsiyada noocan ah.
WatchsApp ayaa noo saamaxaysa:
Gal dhammaan sheekaysiga
Ku arag sawirrada HD buuxa xitaa adigoon gujin
U dir fariimaha codka
Dhegayso farriimaha codka
Bilow sheekado cusub
Dir fariimaha goobta
Ku arag sawirrada shaashad buuxda
Arag fariimaha goobta
Eeg Istiikarada Memoji
Jawaabaha / xigashooyinka farriimaha
Daawo fariimaha la soo xigtay iyo cida laga soo xigtay.
Ku rar dhammaan farriimaha wadahadalka
Farriimaha kooxda, magacyada iyo lambarada taleefanku waa midabo.
WhatsApp for WhatsApp ayaa kuu diyaar ah ku soo dejiso bilaash oo ay ku jiraan wax-iibsi-ku-app. Nooca bilaashka ah waxaa ka mid ah xaddidaadyo taxane ah oo aan furi karno annagoo adeegsanayna iibsiyada gudaha-app. Wuxuu u baahan yahay macruufka 14 iyo ka kor.
Developer: BEYLER Software
WatchApp + ee WhatsApp
WatchApp + ee WhatsApp waa mid ka mid ah codsiyada yar ee u baahan rukhsad si ay u suurto gasho inay furto marin u helka dhammaan howlaha ay bixiso, shaqooyinka sida caadiga ah la mid ah kuwa laga helay dhammaan codsiyada, maadaama dhammaantood waxay ku saleysan yihiin Webka WhatsApp.
Waad ku mahadsan tahay WatchApp + waan awoodnaa helitaanka kooxaha iyo sheekaysiga shaqsiyeed si ay u diraan oo u helaan farriimaha, u arkaan sawirrada iyo fiidyowyada, marin u hel astaamaha isticmaaleha, dir oo hel farriimaha codka ... Codsigan ayaa diyaar kuu ah ku soo dejiso bilaash, waxaa ku jira wax-ku-iibsashada app-ka waxayna u baahan tahay macruufka 11 ama ka sareeya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Shabakadaha Bulshada » WhatsApp » WhatsApp on Apple Watch: sida loo xidho oo loo isticmaalo
Sida loo helo V Bucks lacag la’aan ah Nintendo Switch
Xagee ka jirtaa 5G gudaha Spain?